Miyaa Dariiqa Cayriyeyaasha Barafka ee Silicone Ice Cube? | Jingqi
Xagaagii waa joogaa, taas micnaheeduna waa inaad kubixin doontaa waqti fiican oo isku day inaad isdejiso.
Mid ka mid ah qaababka ugu dhaqsaha badan ee lagu qaboojiyo ayaa ah gudaha gudaha: Ma jiraan wax la mid ah cabitaanka qabow barafka oo hoos u dhiga heerkulkaaga oo kaa caawiya inaad dareento nasiino maalinta kulul.
Sida ugu wanaagsan ee lagu heli karo cabitaankaas qabow waa baraf, dabcan. Cubed, xiirashada ama burbursaday, barafku wuxuu ahaa hub aan qarsoodi ahayn ku garaacida kuleylka. Haddii aadan ilaa hadda uubada u raadin weel cusub oo baraf leh, waad la yaabi kartaa dhammaan xulashooyinka la heli karo. Biyaha qaboojintu waa hawl sahlan oo fudud, laakiin waxaa jira habab badan oo kaladuwan oo shaqada looga qaban karo, laga soo bilaabo dhaqda barafka caagga ah ilaa silikone cusub iyo alwaax sameeye bir-qabata.
Miyaa Waddooyinkooda Barafka Cubeyda Barafka ah ay Nabdoon yihiin?
Jawaabta oo gaaban: Waxay kuxirantahay goorta aad iibsatay. Haddii saxamadaada balaastikada ahi ay ka badan yihiin sannado yar, waxaa jirta fursad wanaagsan oo ay ku leeyihiin bisphenol A (BPA). Haddii ay cusub yihiin oo laga sameeyay caag aan lahayn BPA, waa inaad fiicnaataa inaad tagto.
Marka loo eego Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA), BPA waxaa hada laga helaa xirmooyin badan oo cunto ah, oo ay ku jiraan weelasha balaastikada ah iyo xirmooyinka gasacadaha qaarkood. Maaddadani waxay ku dhacdaa cuntada ka dibna waa la cunaa, halkaas oo ay jirka ku sii jirto. In kasta oo dadka intooda badani ay leeyihiin ugu yaraan qaar ka mid ah jirkooda BPA, FDA waxay sheegaysaa inay aamin ku tahay heerarka hadda jira sidaa darteedna aaney ka walwalayn - dadka waaweyn.
Waxyaabaha caaga ah ee casriga ah waxay leeyihiin lambar hoosta ku yaal oo kuu sheegaya nooca caaggu yahay. In kasta oo aan badanaa ka fikirno kuwan marka la eego bal in dib loo warshadayn karo iyo in kale, lambarkaasi wuxuu kaloo kuu sheegi karaa xaddiga BPA ee laga yaabo in laga helo shay la siiyay. Ka fogow wasakhooyinka barafka iyo weelka lagu keydiyo cuntada ee leh lambarka 3 ama 7 markasta oo ay suuroggal tahay, maaddaama kuwanu ay aad ugu badan yihiin inay ku jiraan BPA qadar aad u sarreeya. Dabcan, haddii baastooyinkaaga ay gaboobeen oo aan lahayn calaamadda dib-u-warshadaynta gabi ahaanba, waxay runtii runtii ku leeyihiin BPA.